ဆက်သွ ယ်ရေး လုပ်ငန်း ဘယ်ကုမ္ပ ဏီတွေ ရမလဲ ??? ကုမ္ပဏီ ၁၂ ခုစာရင်း ကြေငြာပြီ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင် (၂)ခုအတွက် အောက်ပါ Companies ကြီး (၁၂)ခုကို ရွေးချယ်ထားကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ၀န်ကြီးဌာန၊ Telecommunication Operator တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီကနေ ယနေ့ ဧပြီ ၁၁ရက်နေ့မှာ ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
At 4/11/2013 09:30:00 PM No comments:
မီးရှို့ဆန္ဒပြ ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ပုံ ပါဝင်မှု မွတ်စ လင်များ ရှင်းချက် ထုတ်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင်များ အရေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုပွဲ၌ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ပုံကို မီးရှို့မှုအတွက် မွတ်စလင်များက ရှင်းချက်ထုတ်ကြကြောင်း သိရသည်။
At 4/11/2013 09:26:00 PM No comments:
၄၈ လမ်း အစ္စလမ် ဘာသာရေး စာသင်ကျောင်း မီးလောင်ရခြင်းမှာ ပေါ့ဆမှုကြောင့် လောင်ကျွမ်း ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အထောက်အထားများဖြင့် ရှင်းပြရာ အစ္စလာမ် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း ၅ ခုမှ ခေါင်းဆောင်များ လက်ခံခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေက မီဒီယာများသို့ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြောသည်။
At 4/11/2013 09:23:00 PM No comments:
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ခိုလှုံနေထိုင်သော ရိုဟင်ဂျာ ၂,၀၀၀ သည် အမှန်တကယ် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဝင်ရောက် လာကြသူများ ဟုတ်မဟုတ်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရာတွင် မြန်မာ အရာရှိများ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက် ကူညီရန်ရှိကြောင်း ထိုင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Surapong Tovichaikul က ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရှိနေသော ရိုဟင်ဂျာများသည် အမှန်တကယ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဝင်ရောက် လာကြသူများဖြစ်သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ပါက ၎င်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်မည်ဟု မြန်မာ
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် က ၎င်းအား ပြောဆိုကြောင်း မစ္စတာ Surapong အား ကိုးကား၍ ဘန်ကောက်ပို့စ်တွင် ရေးသားထားသည်။
“ကျနော့်ရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို သူ့သမ္မတဆီ ပြောပြပါမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က ပြောပါတယ်။ အဲဒီ နောက်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရွှေ့ပြောင်းခိုလှုံနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၂,၀၀၀ လောက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဟုတ်မဟုတ် စစ်ဖို့ သူ့ရဲ့ မြန်မာအရာရှိတွေကို စေလွှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာတွေထဲက ၅၀၀ လောက်က ကလေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ” ဟု Surapong က ပြောသည်။
At 4/11/2013 08:25:00 PM No comments:
မိုက်ကယ်လန်းစ် အဖွဲ့မှ တေးသံရှင် Jascha Richter နှင့် မြန်မာမော်ဒယ်လ် အမရာဒ်ငြိမ်းတို့ တွဲ၍ ရိုက်ကူးသော ကြော်ငြာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေးသားခဲ့မှုအပေါ် Myanmar Newsweek ဂျာနယ်မှ ကျေနပ်သည်အထိ တောင်းပန်လျှင် ကျေအေးပေးမည်ဟု အမရာဒ်ငြိမ်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
At 4/11/2013 08:24:00 PM No comments:
မြန်မာအကြောင်းနဲ့ စတင် တင်ဆက်မယ့် စီအင်န်အင်န် အစီအစဉ်သစ်
စီအန်အန်သတင်းဌာန၏ အစီအစဉ်အသစ်တစ်ရပ်ဖြစ်သော နာမည်ကျော်အစားအသောက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ခရီးသွားအစီအစဉ် တင်ဆက်သူ အန်သိုနီဘာဒိန်း၏ Anthony Bourdain: Parts Unknow တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစားအသောက်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုများကို ပထမဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ် တင်ဆက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီအင်န်အင်န်က ကြေညာထားသည်။
At 4/11/2013 02:28:00 PM No comments:
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အတ္ထုပ္ပတ္တိ ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးရန် ဇာတ်ညွှန်း ပြီးသွားပြီဖြစ်၍ ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ပေးသည့် ကုမ္ပဏီ တခုဖြစ်သော ဥရောပရှိ Wasting Brother ကုမ္ပဏီသို့ ဇာတ်ညွှန်းပေးပို့ကာ ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်သက်ထွေး ထံမှ သိရသည်။
At 4/11/2013 02:16:00 PM No comments:
ဘီလူးစီးတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်မကြုံဖူးရင်တောင် လူတိုင်းကြားတော့ကြားဖူးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူကနိုးနေရက်နဲ့ ခြေတွေလက်တွေလှုပ်မရ၊ အော်မရပာစ်မရနဲ့ အတော်ကြီးကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အချိန်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လို Sleep Paralysis လို့ခေါ်ပြီးမြန်မာလိုဘီလူးစီးတယ်လို့ခေါ်တဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ကို တစ်ခါလောက်ကြုံဖူးသွားတာနဲ့ နောက်ထပ်ကြုံဖို့လန့်သွားလောက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ရပ်ပါ။
At 4/11/2013 12:56:00 PM No comments:
တူနဲ့ထုတောင် မကွဲဘူးဆိုတော့ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့တော့ သွား မထု လိုက်ပါနဲ့။ သူက ကြော်ငြာဆိုတော့ နည်းနည်းလေး ပိုပြော လိုက်ရမှ စွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လို့ ထင်ပုံရပါတယ်။
သို့ပေမယ့် တကယ်လည်း အကြမ်းခံပါတယ်။ အာမခံလည်း ပေးထား ပါတယ်။ နာနိုနည်းပညာနဲ့ ပြုလုပ်ဖန်တီးထားတဲ့ ယင်း Screen Shield (မျက်နှာပြင် ကာဗာ) ကို Rhino လို့အမည်ပေးထားပါတယ်။
At 4/11/2013 12:43:00 PM No comments:
"ချစ်သူလို ပွေ့ ဖက်ထားပေးမယ့် ကုတ်အကျီ"
သင်ဟာ အခန်းထဲမှာ တိတ်တိတ်လေးနေပြီး အင်တာနက် သုံးရင်း အထီး ကျန်ဆန် နေတက်သူ ရည်းစားမရှိသူ တစ်ယောက်လား.? အားငယ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး..
ဂျပန်နိုင်ငံ University of Tsukuba က ကျောင်းသားလေး တစ်ယောက်ဟာချစ်သူလို ပွေ့ ဖက်ထားပေးမယ့် ကုတ်အကျီ " Girlfriend Coat " ဆိုတဲ့ ဟာလေးကို တီထွင်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Youtube မှာ ချပြခဲ့ပါ တယ်။
At 4/11/2013 12:40:00 PM No comments:
ဗီယက်နမ် လူမျိုးများ အသားအရေနှင့် ခန္ဓာကိုယ်လှပရသည့် အကြောင်း အရင်း
ဗီယက်နမ် နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား အများစုက အသက် ကြီးငယ်မရွေး အသား အရေ ကြည်လင်လှပပြီး ခန္ဓာကိုယ်အဆီမရှိဘဲ သွယ်လျလှပကြတာ ကို တွေ့ရှိ့ ရပါတယ်။ ဘာကြောင့် သူတို့အနေနဲ့ အသားအရေလှပပြီး ခန္ဓာကိုယ် ကြည့်ကောင်း နေရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကတော့ စားသောက်တဲ့ အစား အသောက်အများစုက ဆီမပါတဲ့ ဟင်းလျာတွေ၊ငါး၊ ပုစွန်၊ ကမာ၊ ခရုစတဲ့ ပင်လယ် စာတွေ၊ ကစွန်းရွက်၊ သခွားသီး စတာတွေ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီယက်နမ် လူမျိုးတွေ ကို ကျန်းမာလှပစေတဲ့ အဓိက ဟင်းလျာ တွေ အကြောင်း ကို ပြောပြ ချင် ပါတယ်။
At 4/11/2013 12:25:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအသုံးပြုနေသော နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားများကို စမတ်ကတ် အဖြစ်ပြောင်းလဲ နိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများက လာရောက် စမ်းသပ် မှု ပြု လုပ်နေကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန (လဝက) ထံမှ သိရသည်။
စမတ်ကတ် ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းနိုင်ရန် တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန် နှင့်
At 4/11/2013 10:45:00 AM No comments:
At 4/11/2013 10:41:00 AM No comments:
MMRD ( Myanmar Marketing Research and Development Co., Ltd ) မှ ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်း များသည် ပြည်သူများ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုမှု အခြေအနေ များအား သိရှိနိုင်ရန် ဧပြီလ အတွင်း ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး ၊ နေပြည်တော် ၊ ပဲခူး ၊ ပုသိမ် ၊ မကွေး ၊ မော်လမြိုင် နှင့် တောင်ကြီး အစရှိသော မြို့များတွင်
At 4/11/2013 10:37:00 AM No comments:
မြန်မာ့ရိုးရာသင်္ကြန်ရေ ကစားရာ တွင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်း၊ မဖွယ်မရာပြုမူခြင်း များ တွေ့ရှိ ပါက ပြစ်မှုပုဒ်မ၂၉၀/၂၉၄ အရ အရေးယူမည်ဟု မန္တလေး တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
At 4/11/2013 10:33:00 AM No comments:
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ အချိန်မီ မပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါက နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိနိုင်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းပြောကြား
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေအား အချိန်မီ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ဆွေးနွေးပြောကြားနေ သည့်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား ဧပြီလ ၁၀ရက်က တွေ့မြင်ရစဉ်
တောင်သူလယ်သမား အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်သည့် ဥပဒေအား အချိန်မီ မပြဋ္ဌာန်းနိုင် ပါက နိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ပြောကြားချက်အား ဧပြီလ ၁၀ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းချုပ် ရုံးတွင် တောင်သူလယ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေရေးဆွဲ ညှိနှိုင်းရေးအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
At 4/11/2013 10:26:00 AM No comments:
Samsung ဖုန်းကိုပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ Gorilla Glass လို့ခေါ်တဲ့ ဖန်သား မျက်နှာပြင်သုံး စမတ်ဖုန်းတိုင်း သတိထားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို ယနေ့ခေတ် ဖုန်းတော်တော် များများပါပဲ။ iPhone တောင် ပါပါတယ်။
At 4/11/2013 10:25:00 AM No comments:
ဒီသီတင်းပတ်ကုန်မှာ ကျရောက်မယ့် သင်္ကြန်ပွဲတော်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြီးစီးလုနီးပါး ရှိနေ သလို၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးစတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ဆိုရင်လည်း မဏ္ဍပ်တွေ ဆောက်လုပ်ပြီး ရေကစားမယ့် သူတွေအတွက် လက်မှတ်တွေလည်း ကြိုတင်ရောင်းချ နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ မကြာသေးခင် လတွေအတွင်း မတည်မငြိမ် အခြေအနေတွေ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာတော့ လုံခြုံရေး အစီအမံတွေကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေက ဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်း သင်္ကြန်ပွဲတော် အတွက် ပြင်ဆင်နေတဲ့ လူရွှင်တော်အရိုင်း ကပြောပါတယ်။
At 4/11/2013 10:19:00 AM No comments:
အင်တာနက် လူမှု ကွန်ရက်ကို မိခင်မေတ္တာ ငတ်မွတ်နေတဲ့ သမီးငယ်တဦးက မှန်ကန်စွာ အသုံးချ လာတာ ကို သတိထားမိ လိုက်တယ်။
At 4/11/2013 08:50:00 AM 11 comments:
တရားလို ဂေါပကကို ဝန်ကြီး ဖျောင်းဖျရခက်နေ
အင်းလေးကန် ဖောင်တော်ဦးဘုရားမှ ဈေးသည်အမျိုးသမီး ၇ ဦး အချုပ်ကျ တရားစွဲခံနေရမှုကို ကျေအေးပေးရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝန်ကြီးတဦး၏ တောင်းဆိုမှုကို ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က ပယ်ချလိုက်သည်။
At 4/11/2013 08:47:00 AM No comments:
"ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းနဲ့ အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ"
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာအများရဲ့ လွဲနေတတ်တဲ့အလွဲတွေအကြောင်း စာတွေရေးပေးနေတာသိတော့ ဒကာ တစ်ယောက်က“အရှင်ဘုရား တပည့်တော်တို့ မြန်မာတွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေရင် အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ အဲဒီလိုပဲသတ်သေပြီး သေရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားဘုရား၊ ဟုတ်တယ်ဆိုရင် တပည့်တော်ဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ရဟန်းတစ်ပါးဟာ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုကိုယ် ဓားနဲ့လှီးပြီး သတ်သေ သွားပေမယ့် အဲဒီအခိုက်မှာ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားတယ်လို့လည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်၊ ရဟန္တာဖြစ် သွားရင် နောင် ဘဝမရှိတော့ဘူး မဟုတ်လားဘုရား၊ဒါဆိုရင် ဒီအဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာခံရတဲ့ကိစ္စ တပည့်တော် ဘယ်လို နားလည်ရမလဲ ဘုရား”လို့ မေးဖူးပါတယ်။
At 4/11/2013 07:34:00 AM No comments:
ဧပြီလ (၆) ရက်နေ့ မြန်မာအစိုးရနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့ မြစ်ကြီးနားမြို့၌ တွေ့ဆုံ မည့်အစီအစဉ် ပျက်ပြားမှုသည် တရုတ်အစိုးရကန့်ကွက် ခြင်းကြောင့် ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရသည်ဟု ကချင်အဖွဲ့အစည်းများ ပြောသည်။
At 4/11/2013 07:20:00 AM No comments:
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၈ လမ်းဗလီ မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ စစ်ဆေးတွေ့ရှိမှု အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်၊ စစ်ဆေးမှုများအရ ဗလီဆရာနှစ်ဦး၏ ပေါ့လျော့အားနည်းမှုကြောင့်သာ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားကာ လူ ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ရ၍ ၎င်းတို့အား ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူသွားမည်
၄၈ လမ်းဗလီ မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေမှူး ဦးခင်မောင်သိန်းက ဖတ်ကြားရှင်းလင်းခဲ့စဉ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ၄၈ လမ်းရှိ ဗလီတစ်ခု ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၂ နာရီ ၄၅ မိနစ်အချိန်တွင် မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ယင်းမီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အဖြစ်မှန်ဖော်ထုတ်ရေး ဖွဲ့စည်းထားသော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာကို ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်က သတင်းမီဒီယာ များ တွေ့ဆုံရှင်းလင်းပွဲတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
At 4/11/2013 07:12:00 AM No comments: